लकडाउन खुलेपछि मूल्य एकाएक कम – Daunne News
लकडाउन खुलेपछि मूल्य एकाएक कम
कोरोना संक्रमण प्रवेश र नियन्त्रणका लागि भएको लकडाउनसँगै बजारमा पञ्जा, मास्क, पिपिई, थर्मल गन, फेस सिल्ड, स्यानिटाइजरको माग ह्वात्तै बढ्यो । माग बढेपछि मूल्य पनि अस्वाभाविकरुपले बढ्यो । एउटै वस्तुमा हजार प्रतिशतसम्म मूल्य बढ्यो । अर्थात्, बजारमा कोरोना संक्रमणबाट बच्नका लागि भनी सिफारिस र पहिचान गरिएका सामग्रीको मूल्य अस्वाभाविक भयो । संक्रमणबाट बच्नका लागि ती सामानहरुको खरिद–बिक्री अनिवार्य नै बनेको थियो ।
अहिले कोरोना संक्रमण फैलँदो क्रममा र लकडाउन भने अन्त्य भइसकेको अवस्था छ । यस अवस्थामा सामानहरुको मूल्यमा भारी गिरावट आएको छ । लकडाउनपूर्वको समय, लकडाउन जारी समय र अन्त्यको समयमा भएका यी वस्तुहरुको किनबेच मूल्यबाट कालोबजारीको तस्बिर स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।
कोरोना भए/नभएको थाहा पाउन थर्मल गन सुरक्षित र उपयोगी हुने बताइयो । त्यसपछि धेरै मानिस यसको खरिद–बिक्रीमा लागे । १५ हजारसम्म एउटा थर्मल गनलाई हालियो । तर, अहिले उही गुणस्तरको यस मेसिन जम्मा २ हजार ४ सयमा बजारमा उपलब्ध छ । ‘कोरोना रोगलाई देखाएर रातारात कालोबजारी धन्दा भयो’, निजी अस्पताल समन्वय समिति चितवनका सचिव विक्रम अधिकारीले भने, ‘यसको नियन्त्रणमा राज्य, उपभोक्ता अधिकारकर्मी सबै निरीह रहे ।’ महामारीको समयमा बजार अस्थिर वा बजारमा मनपरी हुँदा अन्ततः आमउपभोक्ता सबैभन्दा बढी पीडित भएको सचिव अधिकारीले बताए ।
कोरोनाबाट बच्नका लागि पञ्जा लगाउन भनियो । जसले गर्दा त्यसअघि जम्मा ३ रूपैयाँ प्रतिएकाइ पाउने पञ्जा ६ रूपैयाँ प¥यो, अर्थात् मूल्य दोब्बर पर्न गयो । अत्यावश्यक भनिएकाले बढीजसो मेडिकल क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले यसलाई खरिद गरे ।
रू. ५० मा पाइने स्यानिटाइजर लकडाउन भएसँगै २ सय रूपैयाँसम्म प¥यो । कतिले किन्न पनि पाएनन् । स्यानिटाइजरको विविध उत्पादनले यसको वास्तविक मह¤व नै हरायो । बजारमा नक्कली वा गुणस्तरहीन स्यानिटाइजर भेटिए । ‘हामी अस्पताल सञ्चालक जो सप्लायर्सको नियमित र धेरै सामान लिने गर्छौं, हामी पनि महँगोमा किन्न बाध्य भयौँ’, सचिव अधिकारीले भने, ‘उधारोमा सस्तोमा पाइएको थियो, तर कोरोनाको हल्लाले हातहाती पैसा तिर्नुप¥यो र उल्टै महँगोमा सामान खरिद गर्न बाध्य भइयो ।’
कोरोना संक्रमणमा सबैभन्दा गजबको व्यापार मास्कको भयो । केही राम्रो भनिएका एन ९५ मास्कलाई उपभोक्ताले ८५० रूपैयाँ तिरे । यस्तै मास्क अहिले बजारमा जम्मा ६० रूपैयाँमा पाइन्छ । ‘मैले ८ सय ५० रूपैयाँ हालेर किनेँ’, भरतपुर–१२ का प्रकाश ज्ञवालीले भने । मेडिकल मास्क लकडाउनअघि जम्मा ३ रूपैयाँ प्रतिगोटा पाइन्थ्यो । तर, अस्पतालका फार्मेसीले नै १५ मा किने र २० मा बेचे । गाउँघरमा त यसको मूल्य ४० रूपैयाँसम्म पर्न गयो ।
कोरोना संक्रमणसँगै पिपिई शब्द पहिलोपटक धेरैले सुने । कतिले प्रयोगमा समेत ल्याए । लकडाउन खुलेपछि अहिले १ हजार ५ सयमा पिपिई बजारमा उपलब्ध छ । यही गुणस्तरको पिपिई लकडाउनपूर्व ८ हजारसम्म किनबेच भयो ।
वस्तु र उपभोक्ता खरिद मूल्य / लकडाउनअघि / लकडाउन अवधि / लकडाउनपछि
पञ्जा / रू. ३प्रति गोटा / रू. ६ प्रति गोटा / रू. ५ प्रति गोटा
मास्क (मेडिकल) / रू. ३ प्रति गोटा / रू. ४० अधिकतम / रू. १० प्रति गोटा
मास्क एन ९५ / रू. ६ प्रति गोटा / रू. ८५० प्रति गोटा / रू. ६० प्रति गोटा
पिपिई खासै प्रयोगमा नआएको / रू. ८ हजार प्रति गोटा / रू. १५ सय प्रति गोटा
थर्मल गन खासै प्रयोगमा नआएको / रू. १५ हजार गोटा / रू. २४ सय प्रति गोटा